SIDA LOO DAAWEEYO ANTHURIUM GURIGA - DHIRTA GUDAHA
Anthurium - oo ah ubax qurux badan oo caan ah, oo noo yimid meelo fog oo ka mid ah kulaylaha Koonfurta iyo Bartamaha Aasiya.
Iyadoo ay ugu wacan tahay midabka aan fiicneyn, anthurium waxaa sii kordhaya guriga, laakiin sifooyinka kala duwan, warshadani waxay u nugul tahay noocyada kala duwan ee cudurada.
Si loo fahmo sida loo badbaadiyo anthurium haddii ay dhacdo jirro, waxaad u baahan tahay inaad ogaato waxa ay yihiin.
Cudurada aan faafin ee anthurium, hababka ay ka tirtirayaan
Cudurada aan la-qaadin ee anthurium - Dhibaatada ugu caansan, inta badan soo baxdo geedi socodka koritaanka ma aha oo kaliya anthurium, laakiin sidoo kale dhirta kale ee guriga. Sida caadiga ah, waxay la xiriiraan xadgudubyada xeerarka mawduuca ama isbedelka adag.
Ku waraabinta soo noqnoqoshada iyo adkeynta biyaha, tayada dhulka, quudinta ciidda, iftiinka, hawo nadiif ah iyo waxyaabo kale - intaas oo dhan waxay wada gartaa heerka koritaanka anterium iyo ubax, taas oo ah sababta aad u noqon lahayd mid deg deg ah, iyo haddii ay dhacdo dhibaatooyin iyo cuduro, isbedelka xaaladaha.
Anthurium ma Bloom
Waxyaabaha laga qabo cudurrada dhirta aan la isku gudbin, anthurium way ka duwan yihiin ubaxyo kale. Tani waxay u saamaxaysaa in aysan si fudud u ogaan sababta keentay dhibaatada, laakiin sidoo kale siyaabo lagu xaliyo. Sida oo kale ubax kale, cudurada anterium waxay mararka qaarkood saameynayaan ubax, si fudud u joojin.
Taasi waxaa sababi kara qaybta faafa, laakiin, sida caadiga ah, sababtu waa jebinta xeerarka mowduuca. Sidaas Anthurium guriga waa in lagu hayaa heerkul ah ugu yaraan 18 ° C, marka maqnaanshaha diyaarinta, iyo sidoo kale qarsoon qorraxda tooska ah.
Waa muhiim! Dheriga leh athurium, waa inay jirtaa lakab saaro, taas oo xaqiijin doonta helitaanka oksijiinta nidaamka xididka iyo saarista biyo xad dhaaf ah. Nidaamka biyuhu waa mid ka mid ah cadawga ugu weyn ee anthurium, sidaas darteed waa inay jirtaa godadka dheriga.
Xallinta dhibaatooyinka leh ubax maqnaanshaha waa mid fudud: waxaad u baahan tahay kaliya inaad abuurto xaalad "aqalka dhirta lagu koriyo" xaaladaha dayactirka iyo quudinta nidaamka xididka leh Bacriminta macdanta.
Waa maxay sababta anthurium u dillaacday
Sida kiis ee dhibaatada ugu horeysa ee gobolka cudurka anthurium, inta badan kiisaska dhirta oo dhoobo sababo aan u hoggaansanayn xaaladaha xabsiga. Anthurium waxay ka baxdaa qalajinta ugu horreyn sababtoo ah waraabinta ku filan iyo heerkulka qolka yar..
Xaaladdan oo kale, waxaa aad muhiim u ah in si deg deg ah loo bedelo xaaladaha xabsiyada ee hagaajinta iyo waa macquul in la quudiyo dhirta leh Bacriminta macdanta.
Xaaladda tallaabooyinka saxda ah iyo waqtigaba, dhibaatooyinka sida "caleemaha qalalan" ayaa badanaa la xalliyaa, laakiin fursadaha ayaa suurtogal ah marka sababtu ay tahay faafinta septoriosis iyo anthracnose, hababka lagu xakameynayo kuwaas oo aan ahayn kuwa faafa oo hoos lagu sharaxi doono.
Ma taqaanaa? Anthurium way adag tahay in lagu dulqaado dheecaanka qoyaanka ee dheriga, si kastaba ha ahaatee, sida wakiil ka mid ah dhirta kulaylaha, ku dhowaad ku tiirsan ee lagu buufinayo caleemaha. Si loo dhammeeyo, beeralayda xirfadlayaasha ah waxay ku taliyaan ugu yaraan hal mar bishii si ay ubax ugu shubaan madaxa hoostiisa, kadibna si tartiib ah u tirtiro boodhka caleemaha geedka.
Caleemaha caleemaha (chlorosis)
Ka jawaabidda su'aasha sababta anthurium uu u xanuunsan yahay, waxaa suurtogal ah in la sheego in dhibaatada ugu wayni ay tahay xaalad sii kordhaysa iyo daryeel aan habooneyn. Chlorosisoo sababa caleenta caleemaha anthurium, waa natiijo ka timid xad-gudubyada ku-darka yar ee biyaha quudinta, ciidda iyo bacriminta.
Waxaa intaa dheer, nuxurka dhibaatada waxaa lagu qarin karaa mid ka mid ah arrimahan oo dhan, isla mar ahaantaas, sidaas darteed waxaad u baahan tahay inaad tirtirto dhammaantood iyada oo aan ka reebaneyn. Sababaha iyo sababaha waxaa lagu xusi karaa:
iswaafajinta ciidda iyo la'aanta nidaam dheellitiran, oo ka hortagaya helitaanka bilaashka ah ee oksijiinta iyo biyaha;
ugu sarreeya ee chlorine ee biyaha;
ka badan iftiinka dabiiciga ah;
waraabinta xad dhaafka ah ama waraabinta biyaha maahan biyo kulul oo kugu filan;
Cudurrada faafa ee Ebola.
Laga soo bilaabo arrintan waxay daba socotaa in anthurium ay ka daalaan sababa dhibaatooyinka banaanka ah ee ka yimaada dhirta kale ee guryaha. Daaweyn - abuurista xaalado sax ah oo ku saabsan dayactirka anthurium, bixinta waraabinta biyaha la dejiyey, iyo sidoo kale quudinta joogtada ah ee Bacriminta macdanta.
Waa muhiim! Nidaamka asaasiga ah ee anthurium waa mid aad u xasaasi u ah isbaddal muuqda ee maaddada macdanta iyo walxaha kale ee ciidda, sidaa daraadeed waa mid aad u muhiim ah inaadan ku dhaafin ubax bacriminta ah. Si aan u waxyeeleynin geedka, waa inaad si taxadar leh u raacdaa tilmaamaha ku qoran baakada bacrimin ee ubaxyada guriga.
Meel caleen (gubasho)
Ku xad-gudubka xanaanada guriga ee kiisaska qaarkood kiisaska qaarkood waxay keenaysaa muuqaalka kore ee caleemaha, taas oo ah, gubasho. Meelaha Brown ee caleemaha anthurium waxaa sababi kara waxyaabahan soo socda:
maaddada qoyaanka xad dhaafka ah iyo la'aanta dheecaan haboon;
soo degista ciidda tayada liidata, maqnaashaha ama macdanta hoose ee macdanta;
waraabin aan habooneyn;
Ma taqaanaa? Ciidda loogu talagalay ubaxyada sida, waa, dhirta ka soo baxa ubaxyada, waa in daruuri ku jirtaa isku dhafka macdanta badan. Tani waxay sabab u tahay dabeecadda kulaylaha - xaaladaha dhabta ah, ee aan aheyn kuwa gudaha, anthurium waxay cunto nafaqo ku filan ka heshay deegaanka. Ciidda ubaxa ah ee lagu soo bandhigo dukaamada ayaa sidoo kale ku jira qaybaha muhiimka ah, laakiin dhammaantood waxay ka mid yihiin dabeecada kiimikada waana la gooyaa wax soo saarka.
Enacia qudaar ah taas oo muujinaysa xaqiiqda ah in anthurium ay lumiso, caleemaheeda waxay soo qaadataa qaab fisqi ah waxayna badanaaba foolxumeysaa koritaan. Dabeecadda cudurkan aan infakshanka lahayn si buuxda looma fahmin, si kastaba ha ahaatee, dhab ahaantii dhibaatooyinka noocan ah ayaa soo baxaya ka dib isbedelka isbeddelka ee nidaamyada heerkulka ee content. Enacii waxaa lagu daaweyn karaa oo kaliya iyada oo la abuurayo xaalado wanaagsan, daryeel habboon iyo bacriminta joogtada ah ee ubaxa.
Furuqa - Cudurka aan cagar-kabuubneyn oo udubdhexaad u ah dhirta oo hoos u dhac ku yimid xaalad dayactir iyo daryeel. Waxaa muuqata muuqaalka kore ee koritaanka iyo dusha sare ee xaashida. Si aad uga takhalusto furuqa waa mid sahlan - waxaad u baahan tahay inaad dhererka ku qaaddo ubax meel diiran, oo laga ilaaliyo qoraalada iyo qorraxda tooska ah.
Cudurrada faafa ee Anthurium, daaweyntooda
Cudurrada faafa ee anthurium ee guriga waa kuwo caadi ah, taas oo ay sababaan waxyaabo badan, oo ay ku jiraan asalka kulaylaha ee geedkaan, waxay doorbidayaan xaaladaha xabsiga iyo shuruudaha daryeelka.
Cudurrada noocyada kala duwan ee faafa waxay saameeyaan, laakiin ha ka baqin oo iska daaya, sababtoo ah mid kasta oo ka mid ah iyaga ayaa si sahlan ugu guuleysan kara gurigaaga. Waxa ugu muhiimsan waa in la fahmo sababta caleemaha u noqdaan madow, ubaxa dhicin, dhibco iyo dhibaatooyin kale waxay ka muuqdaan Anthurium.
Septoria iyo anthracnosis
Anthurium septoria, iyo sidoo kale anthracnose - cudurada fungal caabuqa, ayaa lagu muujiyey foomka dhibco casaan iyo bunni ah. Cuduradan, talooyinka caleemaha badanaa waxay noqdaan madow.
Daaweynta anthracnose anthurium waxay la mid tahay tallaabooyinka loogu talagalay daaweynta septoriosis - daaweyn dhakhso leh kiimikooyinka macdanta, ka saarista meelaha cudurka qaba, si fiican u dhaqidda ubaxa.
Maqnaanshaha natiijada waxtarka leh toddobaadka dhexdiisa, ubaxa waa in la burburiyaa, dheriga waa in lagu daaweeyaa walxaha kiimikada iyo heerkulka sare.
Cudurka faafa ee noocan ahi wuxuu ku bilaabmaa faafitaankiisa iyadoo la naqshadeeyey asliga ah iyo caleemaha ubaxa, si tartiib ah u faafaya caleemaha. Waqtiga gaaban dhirta caleenta cagaarka ah way dhintaan, Sidaa darteed, daaweynta kiriim caleenta warshad waa in ay isla markiiba bilaabaan.
Sida caadiga ah, khubarada ayaa kugula talinaya in la isticmaalo adeegsiga kiimikada kiimikada, gebi ahaanba ka tagta hababka caanka ah, iyaga oo tilmaamaya waxtarkooda hooseeya ee arrintan. Caleemaha saameeyeen ayaa la saaraa, kadib markii ubaxa lagu daaweeyo daawo.
Waa in uu jiraa ugu yaraan seddex wareeg oo ka mid ah falanqaynta noocaas ah. Haddii aysan jirin natiijo sax ah, geedka waa in la burburiyaa dheriga waa in la nadiifiyaa.
Marka malax ka muuqda nidaamka xididka ee ubaxa, caleemihiisa ayaa lumiya midabkooda kadibna waxay bilaabaan inay si deg deg ah u engegaan. Marxaladaha hore ee cudurka this anthurium, waraabinta waa in la dhimo, heerkulka hawada qolka waa in la sara kiciyo.
Haddii ay dhacdo dhaawac aad u daran, nidaamka xididka waxaa lagu daaweeyaa Bacriminta, lagu beeray ciid kale, ka saarista xididdada cudurka qaba.
Fusarium waa nooc ka mid ah infekshanka fangaska. Saameynta ubaxyada anthurium, fusarium waxay ka dhalataa duufaan degdeg ah iyo digaag caleen.
Ilaa hadda, hab wax ku ool ah oo loogu talagalay daaweynta fusarium ma jiro, sidaa daraadeed, waa in si dhaqso ah looga saaraa dhirta kale ee guriga, iyo haddii aysan jirin wax saameyn ah oo ka yimaada quudinta isku dhafka macdanta badan, dhammaantood waa la burburiyey.
Dheriga, ka dib markii dhirta uu ku dhaco Fusarium, waa in si taxadar leh loola dhaqmo heerkulka sare iyo saabuunta.
Jaantuska dufanka on caleemaha anthurium waa calaamad joogto ah oo ka mid ah cudur la isqaadsiiyo. Dhibaatooyinka dabiiciga ah ayaa la baabi'iyaa iyadoo si taxadar leh loogu daaweynayo xaashida xalalka kiimikada ama khamriga.
Xaaladdan, waa inaad marka hore ka saartaa xaashiyaha cudurka qaba. Daaweynta noocan oo kale ah waa in la sameeyaa saddex ilaa afar maalmood seddex wiig.
Waa muhiim! Inta lagu jiro cudurrada faafa ee ubaxyada, waraabinta rooga waa in la gebi ahaanba ka tagaa, maadaama xaaladaha badankood ay ku jiraan biyaha kaas oo badanaaba laga helo.
Qanjiraha Downy - cudur faafa oo saameeya inta badan dhirta guriga. Warshadu waxay noqotaa mid jiran haddii ay dhacdo in la kulmo heerkul iska beddelan, iyo sidoo kale isbeddel muuqata ee qoyaanka qoyaanka mudo gaaban.
Cudurku wuxuu isu muujiyaa muuqaalka midabada, iyo sidoo kale muuqaal ka sii daraya muuqaalka. Dhibcaha caleemaha anthurium - inta badan saameyn ku yeeshay caariyaadka yaryar. Dhibaatadani waa mid si fudud loo xalliyo - iyadoo loo marayo bacriminta ciidda iyo abuurista xaaladaha aqalka dhirta.
Cayayaanka Anthurium, siyaabaha looga hortago
Inta badan sababaha cudurka anthurium waa noocyada qaar ka mid ah cayayaanka in hal dhinac ama mid kale saameyn ku ah nidaamka xididka ee ubaxa, jirkeeda, caleemo. Anthurium, sida ubaxyada kale ee guriga, ayaa ah kuwa ugu nuglaa aphids, gaashaan, caarada iyo kuwa kale.
Aphids, inkastoo ay ka weyn tahay qiyaasta, waxay inta badan keentaa dhaawac weyn u geedka.
Xakamaynta dusha hoose ee buug-yarahaan aphid wuxuu bilaabaa inuu ku biiro soodhada ubaxa, isaga oo ku kicinaya qalajinta degdegga ah. Heerka dhalmada ee cayayaankan waa mid aad u sarreeya, taasina waa sababta ay muhiim u tahay in si dhakhso ah looga jawaabo oo loo bilaabo daaweynta.
Sida cayayaanka kale ee anthurium, aphid waa la ciribtiray si fudud - waa ku filan inaad soo iibsato alaabta la dhammeeyey iyo daweynta meelaha duufsan leh.
Waa muhiim! Maalin ka dib marka lagu daaweeyo ka kooban kiimikada daroogada, caleemaha ubaxa waa in si fiican loo dhaqo biyo cad. Tan waxaa loo sameeyaa si looga hortago abuuritaanka gubasho kiimikada.
Gabbaadku sidoo kale waxaa loo tixgelin karaa mid ka mid ah cayayaanka ugu khatarta badan. Sida kuwa kale, gaashaan wuxuu ciribta caleemaha iyo asliga ah ee ubaxa waxayna ku quudiyaan casiirkooda. Iyadoo loo eegayo xajmigeeda yar, maskaxda shitovka si fiican u saaran ee dogob mugdiga ah anthurium, sidaas darteed waa arrin aad u adag tahay in la ogaado indhaha qaawan.
Haddii aad weli ku guulaysatay inaad ogaato cayayaankan, waa inaad isla markiiba qaadataa talaabo. First of dhan, ubax qaba cudurka waa go'doon oo ku maydhay biyo diiran.
Ka dib qaabsocodyadan, waxaa lagama maarmaan ah in si buuxda loo daaweeyo dhammaan dusha ubaxa iyadoo la adeegsanayo qaababka la iibsado ama madaxbannaan. Sida kiiska daaweynta ka soo cayayaanka kale, maalin ka dib geedka waa in si fiican loo biyo raaciyaa biyo diiran. Nidaamkan waxaa lagu celiyaa laba jeer.
Ma taqaanaa? Waxyaabaha ay bixiyaan dukaamo khaas ah oo loogu talagalay daaweynta dhirta guriga ka soo cayayaanka, sida caadiga ah, waxay leedahay qaab dhismeed badan, taas oo u oggolaanaysa inay si wax ku ool ah u dhaqanto cayayaanka kasta. Si kastaba ha noqotee, xalalka caadiga ah ee saabuunta, oo si sahlan loogu diyaarin karo guriga, si dhakhso leh oo si sahlan u dilaan aphids, gaashaan iyo shil.
Redhead - Mid ka mid ah cayayaanka ugu fudud oo la arki karo. Laga soo bilaabo maalmaha ugu horeeya ee degitaanka ee geedka, dusha sare ee caleemaha waxaa lagu daboolay ubaxyada cad, taas oo ka dhigaysa suurtogalnimada in la ogaado dixiriga.
Iyadoo la socota cayayaanka kale, waxay ku quudisaa lafaha iyo daaha dusha sare ee geedka, taas oo shaki la'aan burburisa anthurium. Nasiib wanaag, waxaa la maareyn karaa budada budada loo yaqaan "powderdery", si fudud ula macaamilka saabuunta ama xalalka khamriga ka dibna ku daadi biyo diirran.
Si loo xaliyo saameynta, daaweynta noocan oo kale ah waa in lagu celiyo ugu yaraan laba jeer, iyadoo isbeddel toddobaadle ah.
Caarada caarada - waxa ugu adag in laga saaro cayayaanka for anthurium, si kastaba ha ahaatee, iyo sidoo kale midabada kale. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in sawirku si qarsoodi ah u qariyey, oo ujeedadiisu tahay shabakad, waxaa laga ilaaliyaa saamaynta dibedda.
Sidaa darteed, kaliya ku dhaq dhuunta caarada ah ma shaqaynayso, iyo isticmaalka habka caadiga ah ee wax lagu shaqeynayo ma siin doono natiijooyin haboon. Xakamaynta caleen iyo dhirta geedka, caarada caarada ayaa si toos ah u burburisa dusha, quudinta casiir iyo macdanaha ubaxa.
Intaa waxaa dheer, sax ayaa ka duwan mid ka mid ah cayayaanka kale ee caado u ah burburinta ma aha oo kaliya caleemaha, laakiin sidoo kale ubaxa dhirta, taas oo shaki la'aan ka sii daran oo aan fiicneyn.
Inkasta oo ay ka muuqato darnaanta caarada caarada, hababka saameynta ay wali jirto. Sidaas cayayaanku uma dulqaadanayo qoyaan badan iyo heerkul hooseeya. Marka la eego tan, ubaxa waa in si toos ah loogu qooyay biyaha, laakiin isla markiiba ka dib, ciidda waa inay ahaataa mid gebi ahaanba la qalajiyey, haddii kale anthurium waxay heli kartaa cudur aan faafin.
Waa muhiim! Xaaladaha qaarkood, khabiiro waxay kugula talinayaan daaweynta anthurium leh kiimikooyin adag oo kiimiko ah, taas oo kuu ogolaanaysa inaad dhakhso iyo si waxtar leh u daaweyso dhirta wixii cayayaanka iyo cudurrada faafa. Waxaa muhiim ah in la xasuusto in qaababka noocan oo kale ah ay noqon karaan qaybo isku mid ah halis u ah cayayaanka iyo bini-aadanka labadaba, sidaas darteed daaweynta waa in lagu fuliyaa daryeelka ugu fiican iyo isticmaalka qalabka ilaalinta shakhsi ahaaneed.
Horumarka Anthurium ee guriga waa nidaam qadarin, oo u baahan in la waafajiyo xeerarka iyo talooyinka.
Dhibaatooyinka iyo cudurada, dabcan, laga yaabee, ha ka welwelin, sababtoo ah hababka ugu fudud oo la fahmi karo waxay dili karaan cayayaanka anthurium. Iyo, ugu muhiimsan, xasuuso - kharashyada iyo waayo-aragnimada kharashka badan waxay ka badan tahay bixinta muuqaalka muuqda ee antropical tropical.